flavour okumnandi ocebile dessert ehlobo, ukugcwaliswa emangalisayo ngoba ophaya namakhekhe, kanye ithuluzi Irreplaceable ekulweni imikhuhlane - raspberry, wagcoba nge ushukela ebusika. Tea nalo, kusukela berry ongahluziwe izithelo iziphuzo ukusiza nge umphimbo obuhlungu, futhi ube okuhle ukufudumala ukusebenza futhi diaphoretic. Uma ama-raspberry noshukela kuvuna ebusika, asikho isithwathwa futhi snowstorms awesabi. Sweet ingxenye udinga ukuthatha kabili njengoba izithelo eziningi, ukuze amabhange zingagcinwa emiphongolweni. Uma sithatha kwengcosana kashukela ke peretortuyu isisindo zingafakwa izigubhu, amabhodlela epulasitiki noma ngisho double izikhwama zepulasitiki nokudla iqhwa. Uma amajikijolo kanye isithako ngobuningi kuthathwe ngamunye ngamunye, ingxube ke zingagcinwa in the esiqandisini. Into esemqoka - kahle izimbiza inzalo futhi ukuhambisana nayo yonke izincomo ukulungiswa.
Okusajingijolo, wagcoba nge ushukela ebusika: iresiphi lokuqala
Per kilogram of ama-raspberry kudingeka ezimbili Kilos ushukela. Amajikijolo rip kangcono serene emva kwezinsuku efudumele, ke amnandi ngempela. Geza raspberry noma kunjalo engenakwenzeka. Kuyadingeka ukuba uthele amajikijolo phezu kwetafula zidlule, uhlukanisa kudoti. Khona-ke wabeka ama-raspberry lehlobile pan koqweqwe lwawo noma isitsha bese ugcwalisa noshukela. Bamba amahora ambalwa esiqandisini ukuvumela amajikijolo juice. Manje kudingeka ugaye. Ungasebenzisa blender, kodwa angasebenzi abaningi bakhetha tolkushkoy ngesipuni sokhuni noma ngenxa ukuxhumana metal namachibi inqubo iqala. Grind udinga ukuba ngokucophelela, Mash eyohlobo ukuthi kwakungekho lonke amajikijolo.
Amabhange kudingeka ukugeza ngensipho, hlambulula ngendlela engcono kakhulu namanzi inzalo noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi, noma isisi. Kungaba kuhhavini. Raspberries ukubola zibe iziqukathi kanye nasetulu aye ngaphasi uthele ungqimba ushukela. Ngakho amazambane okhamiwe wahlanganiswa izohlala kangcono. Vala amabhange kudingeka inzalo ofeleba plastic noma isikhumba iphepha, iphuma ku izingqimba eziningana futhi iduduzekile band. Lokhu raspberry, wagcoba nge ushukela, ke zingagcinwa ngisho egumbini elingaphansi komhlaba, ngisho in the esiqandisini. Vula usuku umkhuhlane ebusika imbiza elimnandi ukubuya ehlobo efulethini yakho!
Raspberries noshukela ebusika: iresiphi yesibili
Amalungiselelo anjalo kungenziwa hhayi kuphela nge-raspberry, kodwa futhi nabanye amajikijolo. ezinhle Ikakhulukazi futhi ewusizo uphendulela strawberry okhamiwe wahlanganiswa kanye currants. Futhi akukho lutho mayelana raspberry futhi ayikwazi ukukhuluma. La majikijolo kuyinto elimnandi kangaka, enhle okumnandi ngefomu peretortom. Futhi kaningi ngaphezu raspberry ushukela ukulungele ebusika manzi. Wabe akaphelelwa izakhiwo ewusizo, ngoba kukhona acid eziningi eziphilayo futhi amaningi amavithamini C, B1, B2, PP, okuyizinto isitoreji elahlekile. Isimo kuphela - okuqukethwe esiqandisini.
Ushukela kanye amajikijolo kufanele uthathe izinga elilodwa komunye. Okokuqala siyixazulule raspberry. Musa ukugeza! Hlunga uhlobo wokudla: uthele etafuleni, ukubeka ngamadolo akhe ngesitshulu amajikijolo futhi ingozi ukuthi unikezele kubo, uhlukanisa zonke amaqabunga, izimbungulu nenye imfucumfucu. Khona-ke, endishini raspberry kudingeka uthele ushukela ugaye ngokucophelela: isikhathi eside, mass kuyoba homogeneous.
Badinga kuphela ukusebenzisa izitsha non-oxidizing: ngengilazi, epulasitiki noma koqweqwe lwawo. Pistil, okuyinto iphawundi raspberry kahle ukukhetha izinkuni. Amabhange akudingeki ukuthatha omkhulu - the best isigamu-litre kanye kancane; niyakulidla ngokushesha. Okusajingijolo, wagcoba nge ushukela ebusika, is hhayi egcinwe ku-container evulekile. Yiqiniso, izitsha kumelwe ahlanzeke kahle futhi scalded ngamanzi abilayo.
Ukupakisha futhi umhlobiso
mass Ukulungele ukubola, ishiye ngamasentimitha amabili entanyeni izimbiza okuxekethile, ingaphezulu ushukela kwelinye isentimitha naseduze. I ungqimba elifakwe isihlabathi uqweqwe ijusi Uqinisa, ngenxa okuyinto emoyeni ngeke idluliselwe okusajingijolo kanye inqubo ukuvutshelwa ngeke ukuqala. Afakwe ezimvilophini isimo ngokushesha lutho. ofeleba kuphela plastic noma isikhumba. Ungavula ifilimu polyethylene nge band nokunwebeka noma yezinhlamvu. nice kakhulu njengokukhethwa kukho isipho, bheka lezi amabhange, embozwe iphepha amahle ahlanganiswe umdweshu noma yezinhlamvu ezinemibala. Okusajingijolo, wagcoba nge ushukela ebusika, zilungele!
Sauce okumnandi for inyama: iresiphi ngesithombe
Iresiphi for the iresiphi: iklabishi zifakwe emanzini anosawoti ukudla okusheshayo "Provencal"
Indlela ukupheka duck ne apula kuhhavini etafuleni iholidi?
Indlela lwalungabola for kvass? Kuhle okuzenzela zokupheka kvass
Polenta e multivarka "Polaris" - zokupheka
Ngingakwazi ukusebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa "Diclofenac"?
UVladimir Mineev - ikusasa MMA Russian
Uju Goqa: indlela ukwenza inqubo
Arina Perchik: Biography kanye nempilo yakho. Ukuphakama nesisindo imodeli
Stalker zone izihlahla: Ungaphuthelwa izinambuzane umqhele
Kia Sorento: Izibuyekezo lesibili isizukulwane Suv
Memo abezinyawo abasha: Yini Njalo Child Okufanele Ukwazi?
Yiziphi Izimpawu kanye Signals yezimoto. Ukushayela ukufakwa imoto alamu
Izifundo ezifekethisiweyo; indlela yokwenza ibhukumaka ezenziwe iphepha ngezandla zakhe
Ukwakhiwa Houses - allegory zokuphila.